Ingabe uMaimi - I-Airbnb
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Montserrat
Indlu yezwe etholakala phakathi kweCaldes de Malavella neLlagostera, phakathi kweCosta Brava neSierra de les Guilleries. Ungakwazi ukufika lapho usuka esiteshini saseCaldes ngebhayisikili noma ngezinyawo ngomzila oluhlaza. Imizuzu eyishumi ukusuka ku-Carrilet Route (umzila omuhle kakhulu wamabhayisikili) oholela e-Sant Feliu de Guíxols. I-Masia isendaweni ekahle yokuhamba komndeni.
Indlu inezitezi ezimbili: esokuqala sithola ikhishi elivulekele igumbi lokudlela elikhulu elisebenza njengendawo yokuphumula, eneziko nomabonakude. Kukhona negumbi lokugezela eligcwele. Phezulu sithola ihholo elikhulu elinendawo enikelwe abancane endlini, igumbi lokugezela elincane namakamelo okulala amathathu amakhulu amakhulu, elinemibhede emibili nama-single amabili lilinye.
Ngaphandle kunamatafula amabili alayisha abantu abangu-12, indawo yokosa inyama yegesi ezokwazi ukuyisebenzisela unyaka wonke kanye nevulandi elikhulu lapho izingane zingadlala khona.
4.68 · 65 okushiwo abanye
E-Caldes nasezindaweni ezizungezile ungaduka amahora amaningi emizileni ehlukahlukene yokuhamba izintaba nezindlela ezahlukene zasemadolobheni ukuze wazi amagugu. Kodwa uma udinga ukuphumula, imithombo eshisayo yedolobhana, enezindawo zokuphulukisa eziqashelwayo, izokwenza kube lula kakhulu kuwe. Unama-spas amabili amahle azokushiya unjengentsha.